Isam-bolana: Septambra 2015
Ny New iOS 9 fichier fixes dia tonga miaraka amin'ny iOS 9.0.2 update
Ny farany farany amin'ny iOS 9 fichier fixes dia nipoitra, latsaky ny herinandro taorian'ny nanombohan'ny Phone 6S sy iPhone 6S Plus. Tonga amin'ny fahazoana ny iOS 9.0.2 izy ireo, azo alaina maimaim-poana amin'izao fotoana izao. Votoatiny kely izany, fa izao manaraka izao: Manitsy ny ...
Torolalana amin'ny dingana isan-tsokajiny amin'ny fananganana mpanoratra mpaneho hevitra izay tsy afaka manantena ny hanokatra
Email autoresponders no gracil de marketing. Manangana andian-mailaka indray mandeha ianao, ary vita. An'arivony, angamba an'arivony an'arivony, ny olona no hahazo ny mailaka mitovy aminao, amin'ny filaminana iray ihany. Izany dia ahafahanao mamorona tsy fitovizan-kevitra ...
Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) & Microsoft Operations Management Suite (OMS) haingana rohy
Mizara ny zavatra ataoko indray mandeha indray aho. Ireto misy lohahevitra roa mety ho vaovao aminao, na tsia. Miezaka ny mandrindra ny loharano ho an'ny ATA sy ny OMS aho. Antenaiko fa ilaina ireo. Heveriko fa mety hihaino bebe kokoa ianao ...
Ahoana ny fametrahana OS X El Capitan
Ny OS X El Capitan vaovao dia manasongadina ny "Split View" vaovao, izay misy ao Safari, Mail, Notes, Maps, ary ny sary. Mba hametrahana ny tànanao amin'ireo zavatra vaovao rehetra ireo, dia tsy maintsy mametraka ny rafitra miasa ao amin'ny Mac ianao. Raha te hanao asa ianao ...
Nvidia dia manolo-tena ny tolotra maimaimpoana maoderina toy ny GeForce Now
Ny orinasam-pifamoivoizana an-tsokosoko an'i Nvidia dia vonona amin'ny fotoam-bavaka. Ny haza-pamokarana Santa Clara dia mamerina ny serivisy tsy misy fangatahana amin'ny GeForce Now miaraka amin'ny drafitra hifaninana mivantana amin'ny serivisy tahaka ny PlayStation Now amin'ny vidiny mora kokoa. GeForce Now dia manolotra fahafahana ho an'ny ...
Ampifanarao ny fandefasana ny mailaka tsy misy fiafaran'asa
Vao haingana dia tsy maintsy niasa tamin'ny mpanjifa iray aho (izay tsy nampoiziko) fa tsy faly nanamboatra sehatra faharoa ho antsika mba hanampy amin'ny fifindra-monina avy amin'ny tontolo iainana. Noho izany dia niresaka tamin'ny vitsivitsy amin'ireo namako aho izay manana traikefa ho an'ny adala ...
Mitondra miaraka amin'ny Google Nexus 6P
Ny fantsom-baovao vaovaon'i Google dia manana fifandraisana haingam-pandeha haingana ary fakantsary izay miasa tsara amin'ny hazavana ambany. SAN FRANCISCO-Google dia manana sainam-pitaovana vaovao vaovao Android Android: ny Nexus 6P. Nanoloana ny Nexus 6 Motorola natsangana, ity telefona ity dia natsangana manokana mba hanararaotra ny Android 6.0 Marshmallow. Nandany ...
Ahoana ny fametrahana Kali Linux 2.0 raha tsy misy fifandraisana Internet miasa
Ity lesona fohy ity dia mampiseho ny fomba fametrahana Kali Linux 2.0 amin'ny solosaina izay tsy manana Internet, na tambajotra, fifandraisana. Ny iray amin'ireo asa izay ataon'ny Solontenan'i Kali Linux mandritra ny dingana fametrahana dia ny manamarina ny fifandraisana eo amin'ny tambajotra, ary, ...
Ny Mac Exploit New Mac dia mora manimba ny vavahadin-tseraseran'ny Gatekeeper, afaka mamela ny fametrahana ireo malicious Apps
Nampidirin'i Apple tao amin'ny 2012 ny mpiandry vavahady, ka namorona azy ho fomba fiarovana ireo mpampiasa manohitra ny fandrahonana maloto amin'ny fampidirana ireo karazana fiarovana samihafa mandritra ny fametrahana Mac apps. Ny endri-javatra dia natao hanomezana antoka fa ny mpampiasa mpampiasa miezaka mametraka eo amin'ny Macs dia tena ara-dalàna sy ...
iPhone 6s / 6s Plus nalefa tamin'ny 2 Chips A9 samihafa, ity fampiharana ity dia mampiseho anao hoe inona ny variana amin'ny findainao
Rehefa nanambara ny iPhone 6s sy ny iPhone 6s Plus i Apple, dia nilaza taminay fa ny finday dia manana ny CPU vaovao namboarina A9, izay mitondra antontan'isa mahavariana amin'ny tabilao. Ny zavatra tsy fantatsika dia ny famolavolan'ireo mpivarotra roa samihafa ity chip ity ...
Google dia manana takelaka vaovao izay vonona ny hiady amin'ny fitaovana enti-manentana ho an'ny vokatra toy ny Apple's iPad Pro sy Microsoft's Surface. Ny tebiteby mialoha ny fanambarana dia mamatotra tanteraka ny zava-drehetra, fa raha tsy nahomby ianao, ny pixel C (izay miendrika convertible) dia 10.2-inch slate ...
From KitKat to Marshmallow: Ahoana no nanovako ny televiziona androany efa ela mba hitazomana azy io ho mahafinaritra sy mahomby
Antsoy aho agnostika smartphone. Noho ny fialambolin'ny jeografia sy ny vanim-potoanan'ny fifindrà-tsaina tsy hivoaka avy amin'ny orinasa teknika, dia tsy nahalala aho tamin'ny onjam-peo voalohany tamin'ny revolisiona finday. Tamin'ny fotoana nividianako ny finday Android voalohany, KitKat dia efa lasa ...
Nexus 6P Vs Nexus 5X Vs iPhone 6s Vs iPhone 6s Plus [Comparte Espaces]
Google dia tsy nanambara fa tsy iray, fa ny roa vaovao Nexus android androany, ny Nexus 6P sy Nexus 5X, ary samy mahita tsara tsara tokoa. Ara-drariny na diso, mafana amin'ny alàlan'ny fahatongavan'i Apple's new iPhones, saika tsy azo ihodivirana ny fanolorana an'i Google ...
Fetram-pitenenana fito-n'ny mpitsikilo fohy
Mametraka ny laharana maimaim-poana farany ary misy ny vintana tsara ho hitanao ny adware sasany, saingy ny ankamaroan'ny olona dia mahafantatra ny fomba hisorohana izany. Safidio ny safidy "Fitoerana fandefasana", tsindrio ny "Decline", manaova takelaka vitsivitsy ary ho azo antoka ianao. Mampalahelo fa misy orinasa mpikirakira dokambarotra ...
OS X El Capitan famerenana
OS X El Capitan dia mitondra traikefa matihanina, matanjaka ary matanjaka kokoa amin'ny Mac. OS X Leopard dia niteraka OS X Snow Leopard. OS X Lion dia nanomboka ny OS X Mountain Lion. Ary ankehitriny OS X Yosemite dia niterahana OS X El Capitan. Tahaka ny lehibe monolita ...
Ny TiVo Bolt DVR dia mamonjy anao amin'ny fotoana rehetra
Ny boaty vaovao TiVo dia sarobidy kokoa noho ny TV serie-cable DVR, saingy mikendry ny ho tsara kokoa amin'ny fanitsakitsahana ny dokam-barotra sy horonan-tsary. Hahazo tombon-tsoatsika koa izy. Azonao atao ve ny mametraka vidiny amin'ny fotoana voavonjy? Angamba, raha TiVo ianao. Ny TV TiVo Bolt vaovao dia mitoetra ho ...
Nexus 6P vs Nexus 6 Ny Nexus 6 dia fialan-tsasatra ho an'ny sehatr'asa Nexus ao Google, mivezivezy amin'ny habe sy ny sainam-pirenen'ny phablet. Fa mbola nampiaiky volana izany, noho ny teboka ambony sy ny endri-tsoratra, plus androany Android an-tsena. Ankehitriny, miaraka amin'ny Nexus 5X, ...
Solon-dahatsoratra Top Support ho an'ny Microsoft Exchange Server 2013
Ity ny lisitry ny vahaolana Microsoft Support ho an'ny olana mahazatra indrindra amin'ny fampiasana ny Microsoft Exchange Server 2013. 1. Solosaina mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa: Ahoana ny famongorana ny mpamily filtre kernel ao amin'ny Windows Exchange 2013 Client Access Server Configuration: Exchange ...
Miaraka amin'ny iPhone 6 Plus sy ny 6 Plus Plus dia manana fahafahana mampiasa ny efijery an-trano ianao amin'ny alalan'ny fomba amam-panao (miaraka amin'ny iPhone mifono horizontaly) na amin'ny fomba amam-pitaovana (ny iPhone dia mihazakazaka). Raha jerena ny fiheverana ny horonan-tsary voafantina, mety tsy tianao ny ...
HP mitondra mpividy mpanjifa elitely EliteBook 705 G3
Raha toa ianao ka manara-maso ny HP EliteBook Folio 1020 G1, azonao atao ny mijanona. Ny new EliteBook HP 705 G3 an'ny HP dia ivontoeran'ny efitrano fampiroboroboana midadasika midadasika midadasika izay mora sy malefaka. Ny andiany 700 dia mamoaka sombin-tsarimihetsika maro hita ao amin'ny ...
1 2 3 4 ... 35 Manaraka
lalao Time SSD Company Bing CentOS Malagasy Bible Chrome Microsoft Windows Windows Phone Nginx takelaka fikirakirana 04 Ubuntu 14.10 famerenana HTML Rafitra fikirakirana Screen PPA fanamarinana web server Apache command line Twitter Firefox app store fitaovana Support WordPress bilaogy rindrambaiko tahirin-kevitra Windows 8 raki-daza toe-tsaina Database Facebook web browser OS X Users Linux Ubuntu Systems Phone GNOME YouTube SEO USB Video finday avo lenta fitaovana finday iPhone IP adiresy Unix MySQL fikarohana Fitaovana finday 10 Toetoetra Unité centrale famotsorana Ubuntu 16 taona hametraka vaovao farany ubuntu 15.04 MAMAKA Apps Ubuntu PDG Windows 10 Up " HTTPS Debian ram fitaovana Plugin Ubuntu 14.04 Android Performance windows update afa-po fitaovana Windows HTTP File Samsung Apple Watch Cortana nbsp Linux Mint Server Google rafitra SSH 'App Command Microsoft haino aman-jery sosialy loharano misokatra lalao endri-javatra Samsung Galaxy Linux "PC paoma fifamoivoizana API One ' Plugins CentOS 7 PHP bilaogy